युगसम्बाद साप्ताहिक - नेता भाड्नतिर जनता जोड्नतिर
नेता भाड्नतिर जनता जोड्नतिर
Tuesday, 04.18.2017, 11:27am (GMT+5.5)
नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो समय संविधानसभाले जारी गरेको संविधानमा तराई (मधेश)लाई विभेद र अधिकार नदिएको चर्का नारा लाग्ने गरेको छ । तर, विभेदमा पारियो भन्नेहरु त्यही मधेशमा सदियौंदेखि उत्पीडनको शिकार भएकाहरुको उत्थानमा चासो राख्दैनन् । उनीहरु पहाडेले मधेशीलाई थिचोमिचो गरेको भन्छन्, तर त्यही पहाडे मधेशका पिछडिएका वर्गका लागि भगवानका रुपमा उदाएका छन् । सन्दर्भ बर्दिबासको एकीकृत मुसहर नमूना बस्तीको हो । यो काम जसले गरे उनीहरु मुसहरका लागि भगवान सावित भए । सपनामा पनि नसचेको घर पाए, शिक्षा, स्वास्थ्य अनि रोजगारी समेत ।
यो काम न सरकारले, न कुनै राजनीतिक दलको नेताले वा न कुनै गरीब, विपन्न, पिछडिएका समुदायका बालबालिकाका नांगा तस्वीर देखाएर डलर खानेहरुले नै गरेका हुन् । यो काम गरे टेलिभिजन र रंगमञ्चमा जनतालाई हाँसो छर्ने कलाकार दम्पत्ति सीताराम कट्टेल र कुञ्जना घिमिरे (धुर्मुस–सुन्तली)ले । उनीहरुले पर्दाबाट मात्र हैन, यथार्थमै जनतामा हाँसो ल्याउने काम गरे– तीनवटा एकीकृत बस्ती बनाएर ।
पछिल्लो बस्ती बर्दिबासमा बन्यो– मुसहरका लागि । यो काम सजिलो थिएन । हुन्थ्यो भने अथाह धनराशी ढुकुटीमा थुपारेर बसेको, लाखौं जनशक्ति भएको सरकारले पनि गर्नसक्थ्यो तर, सकेन । स्रोत–साधन सबै भएर पनि केही नभैरहेका बेला एक कलाकार दम्पत्तिको यो कार्यको सह्राना जति गरे पनि हुन्छ । मधेश झरेका यो जोडीको सक्रियता, त्यहाँका जनताको भावना र राष्ट्रियताप्रतिको सचेतना देख्दा नेताहरु कति गलत रहेछन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
एकीकृत मुसहर नमूना बस्ती नयाँ वर्ष २०७४ को शुभारम्भसंगै हस्तान्तरण भयो । बस्ती हस्तान्तरणको क्षण अत्यन्त भावुक बनेको थियो । नेताहरुले केही गर्नै चाहेनन् भन्ने आक्रोश जताततै थियो । हुन पनि बस्ती हस्तान्तरण समारोहमा बोल्ने कलाकारहरुदेखि घर पाउने मुसहरहरु समेत त्यही कुरा दोहो¥याइरहेका थिए– यो देश अब हामीले बनाउने हो ? मुसहर बस्ती हन्तारण समारोहमा पुग्दा पंक्तिकार पनि त्यत्तिकै भावुक बन्यो । मुसरह बालबालिका र वृद्धवृद्धाका कुरा सुन्दा र उनीहरुको विगत सम्झँदा जोसुकैको आँखाबाट आँसु खस्न करै लाग्थ्यो ।
जुन वातावरण र परिस्थितिकाबीच मुसरहरहरुको जीवनमा कालापलट भयो त्यसको श्रेय मात्र कलाकार दम्पत्ति र यो दम्पत्तिको अभियानलाई साथ दिने देश–विदेशमा रहनुभएका नेपालीहरुलाई जान्छ । राज्यले के ग¥यो र गरेन भन्ने प्रश्न यहाँ गौण रहन्छ । धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनलाई अहिले पनि रकम जुटिरहेको छ र उनीहरु छिट्टै नै अर्को बस्ती निर्माण गर्ने समेत संकेत दिए । यो सुन्दा जो कोहीको मन भावुक हुन्छ । आँखा रसाउँछ ।
धुर्मुस–सुन्तली काभ्रेको पहरी बस्ती, सिन्धुपाल्चोकको गिरान्चौरपछि महोत्तरी बर्दिबासका मुसहरका लागि ‘भगवान’ सावित भए । जानकीभूमिमा सीताराम दम्पत्तिको यो पुण्य कार्यको सबैले सह्राना गरे । अनि भने “यो अभियानमा अब हामी पनि साथ दिन्छौं । यो देश अब हामीले नै बनाउने हो अरुले हैन । नेताहरुले देश बनाउलान भन्ने आश मरिसक्यो ।” अरु त अरु शिक्षाबाट वञ्चित मुसहरहरु नै यही कुरा भन्छन् । नेताहरुप्रति उनीहरुको तीब्र आक्रोश थियो । एक वृद्ध मुसहर भन्दै थिए– “चुनावका बेला नेताहरु कुकुर कुदेजसरी आउँछन्, बाबुहरु तिमीहरुलाई यो गरिदिउँला, त्यो गरिदिउँला भन्छन्, तर त्यसपछि सबै हराउँछन् । हाम्रा लागि धुर्मुस–सुन्तली भगवान हुन्” ।
उनी थप्दै थिए– “हाम्रा लागि घर बनाउने जमीन छैन, चर्पी नबनाए सहयोग दिंदैनौं भन्छन् । कमाएर खाने टुंगो छैन, केटाकेटी पढा भन्छन् । भनेर मात्रै हुन्छ ?” हुन पनि मुसहरहरुका लागि भनेर अढाई दशकदेखि विभिन्न संघसंस्थाले काम गरेको कागजी रिपोर्टमा परिवर्तन आएको त देखाए, तर यथार्थमा उनीहरुको अवस्था जस्ताको तस्तै । अहिले अफ्रिकामा कार्यरत एक महिला भन्दै थिइन्– २५ वर्षअघि म संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत यहाँ काम गर्न आएको थिए, तर अवस्थामा कुनै सुधार भएको रहेनछ ।” उनले मुसहर बस्तीको स्वास्थ्यका लागि भनेर रकम सहयोग समेत गरेकी थिइन् ।
यो देशमा सबथोक छ । प्राकृतिक स्रोत–साधन छ, धार्मिक–सांस्कृतिक केन्द्र छन् । सीता–बुद्धको जन्मथलो, विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमा, अनि दक्षिण एसियाकै प्यास मेटाउने क्षमता राख्ने जलस्रोत । अब यसपछि थपिएको छ अर्को स्रोत, विदेशिएका नेपालीहरु । जसरी उनीहरुले धुर्मुस–सुन्तलीको एकीकृत बस्ती अभियानलाई खुला हृदयले सक्दो सहयोग गरे सिंगो देश बनाउन त्यस्तै सहयोग नआउने भन्ने कुरै छैन । खाँचो केवल इमान्दार नेतृत्वको मात्र हो ।
नेपाल बनाउन ६०१ जनाको भेडीगोठ चाहिंदैन । सीताराम दम्पत्ति जस्ता केही व्यक्ति वा समूह नै काफी हुनेरहेछ । भूकम्प पीडितका नाममा आएको अथाह धनराशी ढुकुटीमा ढुसी परेको छ । पीडितहरु अझै पनि छाप्राको बासमा छन् । राजनीतिक नेतृत्व, नीति निर्माता, योजनाविद् र कार्यान्वयनकर्ताको अकमण्र्य सोच र संस्कारका कारण नेपाल विकासको गतिमा हैन विनाको दैलो उघार्दैछ । धुर्मुस–सुन्तली एकीकृत मुसहर नमूना बस्ती हस्तान्तरण कार्यक्रममा त्यहाँ पुगेका कलाकारहरु पनि यही कुरा भन्दै थिए ।
लामो समय अमेरिका बसेर फर्केका नायक सरोज खनाल “यो देशका नेता, सरकार निदाइरहेको अभिनय गरिरहेको हुँदा अब हामीले काम गर्ने हो” भन्छन् । खनाल आफू पनि यो अभियानमा लागिपर्ने घोषणा समेत गरे । प्रसिद्ध कलाकारद्वय मदनकृष्णा श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले त “धुर्मुस–सुन्तली चुनावमा उठ्ने हो भने प्रचण्ड र ओली जस्ता नेताको पत्तासाफ हुने” अभिव्यक्ति दिए । यो नेताहरुप्रतिको आक्रोश मात्र थिएन, सच्चिने सुझाव पनि थियो । चिप्ला कुरा गरेर जनताको गाँस–बास जुट्दैन भन्ने दृष्टान्त थियो ।
बर्दिबास–जनपुर र सिन्धुलीमा स्थानीयबासीसंगको कुराकानीका क्रममा उनीहरुबाट यस्तै धारणा अभिव्यक्त भए । यो देश नेताले बिगारे, अब हामी सपार्छौं । जनकपुरमा त्यस्तै अवस्था छ । मधेशवादीहरुको बाहुल्य रहेको क्षेत्रमा नेताहरुको उपस्थिति छैन । पौराणिक कालसम्म जोडिएको जनकपुरधामको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा कुनै राजनीतिक दलका नेताको चासो छैन । चासो लिएका छन् केही युवाहरुले । उनीहरुले नगरपालिकाको सहयोगमा अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न सफल भए । पोखरी नै पोखरीको शहर जनकपुरका अस्तित्व मेटिंदै गएका पोखरीहरुको पुनःनिर्माण र संरक्षण भैरहेको देख्दा “अब यो देश हामीले नै बनाउने हो” भन्ने अभिव्यक्ति सार्थक हुँदै गएको छ ।
काठमाडौंमा बसेर गाउँघर र यहाँबाट टाढा के भैरहेको छ भन्ने देखिंदैन । त्यसका लागि स्थलगत अवलोकन नै गर्नुपर्छ । मुसहर बस्तीको सुन्दरता, मुसहर वृद्धवृद्धाका चाउरी परेको गालामा छाएको मुस्कान अनि बालबालिकाहरुमा अब हामीले पनि पढ्न पायौं, राम्रो स्वास्थ्य पाउने भयौं र खेल्न पनि पाउने भयौं भन्ने खुसीको भाव बुझ्न सरकारको उपस्थिति नै रहेन । त्यो ठूलो विडम्बना हो । सपनामा पनि नचिताएको कुराा पाएका उनीहरु खुसी व्यक्त गर्न सकिरहेका थिएनन् । विकास भनेको वृद्धवृद्धाको सहारा र बालबालिकाको मुस्कान नै हो भन्ने त्यहाँ पुगेपछि देखियो ।
राजनीति भनेको समाजसेवा हो भन्ने धेरैले बुझेका छन् तर राजनीति गर्नेहरुले चाहिं नबुझेको नाटक गरिरहेका छन् । किनभने विकास गर्ने हो भने इमान्दार मनले आव्हान मात्रै गरे पुग्छ । लगानी कति आउँछ कति ? दुईजना कलाकारले आव्हान गर्दा स्थानीय तहदेखि परदेशबाट सहयोगको ओइरो लगिरहेको छ । सरकारले नै आव्हान गरेको “जनताको पानी जनताको लगानी” योजनाको थोरै अवधिमा अर्बौं रुपैयाँ जुटेको छ । के यो नेपाली जनता देश बनाउन कति उत्सुक छन्, लगानी गर्न तत्पर छन् भन्ने प्रमाण हैन ? इमान्दार भएर काम गर्ने हो भने रकमको अभाव हुँदैन । देशभित्र र बाहिरबाट आउने सहयोगबाटै ठूलठूला काम गर्न सकिन्छ ।
तर, काम गर्ने कसले ? अब हामीले नै काम गर्ने हो । नेताको भर धेरै प¥यौं । अब उनीहरु आफ्नो ठाउँमा हामी जनता आफ्नो ठाउँमा हिमाल–पहाड–तराई एकजुट भएर हातेमालो गर्दैै अघि बढ्ने हो भने छोटो समयमा धेरै काम हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा– राजनीतिक दलका नेताहरुले भनेजस्तो न जातीय विभेद, न रंगभेद, न क्षेत्रीय विभेद नै देखियो । सबैको मुखमा एउटै कुरा थियो– “देश बनाउन अब हामी नै अघि सर्नुपर्छ” । कसैले पनि हामी तराईको, तिमीहरु पहाडको भन्ने सोच नै राखेका छैनन् ।